Mayelana NATHI - Yiting Environmental Protection Intelligent Technology Co., Ltd.
I-Yiting Environmental Protection Intelligent technology Co Ltd. itholakala e-Dongguan, edume nge- "factory world". Izinzuzo ezihlukile ngokwendawo zenza i-Yiting ukuvikelwa kwemvelo ileveli efanayo neyamazwe omhlaba futhi ihole ukuthambekela kwezimboni kusukela ekuqaleni.
Ukuvikela ukuvikelwa kwemvelo kuthola ukusekelwa okujulile nokwethenjwa kwamakhasimende selokhu kwasungulwa. Lokhu kwenza inkampani ikhule ngokushesha; Le nkampani iyibhizinisi lokonga amandla nezemvelo, eligxile ekukhiqizweni kokuklama, ukuthengisa, ukufakela, insizakalo yangemva kokuthengisa kagesi kadoti, uthuli lwemfucuza, amanzi amdaka, umoya omncane, umsindo neminye imishini yokuvikela imvelo. Le mishini isebenza ikakhulukazi embonini yefenisha, imboni yezicathulo, imboni yamakhemikhali, izimboni ze-elekthronikhi, izitshalo zamandla neminye imikhakha eminingi; Sihlala sinamathela kwisayensi nakwezobuchwepheshe njengesiqondisi; I-Brand isekelwe; Isevisi njengokusekelwa, futhi silwela ukukhuthaza ukuhlanganiswa kokuvikelwa kwebhizinisi kwezemvelo namasiko emvelo, baba ngabameli abenza amasiko aluhlaza okotshani.
Ukuvikelwa kwezemvelo i-Yiting kuhlonyiswe nge-workshop ejwayelekile yesimanje, i-workshop ejwayelekile yokukhiqiza, ucwaningo lwezokuthuthukiswa kwezesayensi nobuchwepheshe, igumbi lokuhlola lokuhlola elinokuhlomisa kahle, igumbi lokuhlola lomkhiqizo nezinye izikhungo. Inkampani yethu inamandla amakhulu okukhiqiza we-batch imishini yokuvikela imvelo, ikhono lokuqamba, ukuhlaziywa kanye nekhono lokuthola, ikhono lokuhlola njalonjalo.
I-Yiting ukuvikelwa kwemvelo inamathela kwifilosofi yebhizinisi yokugxila kubantu, umgomo wobuqotho, ukuqamba, insizakalo, ukunamathela enhlosweni yebhizinisi ikhwalithi ibe ngeyokuqala neKhasimende kuqala, ukulwela ukuphishekela ukukhubazeka "okungu-0". Inkampani iyaqhubeka nokwenza futhi ivuselele imikhiqizo emisha, ukuhlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo ezigculisayo.
Umnumzane ukhonza incwadi, lokhu kuyasungulwa futhi kuzalwa iTao; Inhlonipho nokwethemba, ngqo kubantu.Umuntu angalinqoba ikusasa ngobuqotho nangencwadi, ibhizinisi linjalo, liba ngumuntu walo omkhulu, ligcine impande ikhambi futhi ube nomqondo ophakeme; Kulabo abakude, ukwazi umthombo wokubukeka nokwakha inani eliphakeme lephupho.Ozakwethu bokuvikela imvelo bazimisele ukuhlangana nawe ukudala ukonga amandla, ukuvikelwa kwemvelo, imvelo Ikusasa liza kithi ...